Ifulegi kazwelonke eNingizimu Afrika
Ifulegi kazwelonke, elaqala ukusetshenziswa ngo-27 Ephreli 1994, laklanywa nguMnu Fred Brownell, owayengumNumzane waseHulumeni waseNingizimu Afrika. Imibala kanye nokuklama yi-abstract evela emlandweni we-flag waseNingizimu Afrika.
Imibala ehlukene nemibala enemibala inezincazelo ezahlukene kubantu abathile, ngakho-ke akukho mfanekiso owodwa ongathintwa kuwo. Umklamo ophawulekayo wefulegi uqala ekuthunyelwe kwefulegi ngesimo se-'V 'esigijima esigabeni esisodwa esiqondile esiholela emaphethelweni angaphandle.
Lokhu kufanekisela ukuguqulwa kwabo bonke abantu abahlukahlukene emphakathini waseNingizimu Afrika abahamba emgwaqweni oya phambili ubumbene. Le ngqungquthela yokuhlangana neyunobunye isuka kwisiqubulo esivela eNingizimu Afrika yezambatho zeMpi - Ubunye Ngamandla
Uma uhamba ngefulege i-flag kazwelonke kufanele ilandelwe kuGazethi KaHulumeni 22356, Isaziso 510 sika-8 Juni 2001. Uma ubonisa i-Flag of South African National, ngokuzenzekelayo, umcibisholo wokugcoba kufanele ube ngakwesobunxele neqembu elibomvu phezulu.
Uma ubonisa ifulege ngokumelene nodonga, ibhande elibomvu kumele libe ngakwesokunxele kombukeli ngombono wokugquma phezulu. Emhlanganweni womphakathi, nefulegi kazwelonke iboniswa eceleni noma ngemuva kwesikhulumi somphakathi, ifulege kufanele ifakwe kuzikhulumi ngakwesokudla. Uma kufakwe kwenye indawo emhlanganweni, kufanele kube ngakwesokunene kwezilaleli.